ဇွန်လတွင် Netflix တွင်ဖြန့်ချိမည့် Marvel ၏ SHIELD Season4၏ကိုယ်စားလှယ်များ - တီဗီ
ဇွန်လအတွက် Netflix တွင်ဖြန့်ချိခံရဖို့ SHIELD ရာသီ4၏အံ့’s ခြင်းရဲ့အေးဂျင့်
နယူးယောက် - စက်တင်ဘာ ၁၉ - BUILD စီးရီးများသည်မင်းသား Clark Gregg အား 'S.H.I.E.L.D. ၏အံ့ဖွယ်အမှုများအကြောင်းဆွေးနွေးရန်ဆွေးနွေးသည်။ နယူးယောက်စီးတီးရှိစက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်၊ 2016 ရက် AOL ရုံး၌ (Mireya Acierto / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Netflix က 2017 ခုနှစ်အပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်း stand-up ဟာသအထူးထုတ်ပြန်ရန်စီစဉ်ထားသည် Netflix ရှိကလေးများရုပ်ရှင်: Kung Fu Panda ပြန်လာပြီ
အချို့သောကောလာဟလအသစ်များအပေါ် အခြေခံ၍ SHIELD ရာသီ ၄ ၏အံ့’s ခြင်း၏ကိုယ်စားလှယ်များကိုဇွန်လတွင် Netflix တွင်ဖြန့်ချိသင့်သည်။
ကျနော်တို့နှင့်ပတ်သက်။ အသစ်သောသတင်းအချက်အလက်ရှိသည် SHIELD ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ် Netflix အပေါ်ရာသီ4လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ။ များအတွက် IMDB ဇာတ်လမ်းတွဲလမ်းညွှန်အပေါ်အခြေခံသည် SHIELD ၏အံ့’s ခြင်း၏ကိုယ်စားလှယ်များ, ကြည့်ရတာ SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ4ဖြန့်ချိလိမ့်မည် 2017 ဇွန်လ 15 ရက်, Netflix တွင်, ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်သင်သိစေချင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအခြေအနေ - SHIELD ရာသီ4၏အံ့’s ခြင်း၏ကိုယ်စားလှယ်များသည်ဇွန်လ ၁၅ ရက်တွင် Netflix သို့လာရောက်လာကြသည်။
ရာသီဥတုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးသည့်နောက်ရက် ၃၀ အကြာတွင် ABC ရုပ်သံပြပွဲအချို့ကို Netflix သို့ထပ်ထည့်သည်။ က SHIELD ၏ gents သူတို့အားပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် SHIELD Season4၏အေးဂျင့်များကိုရာသီကုန်ဆုံးပြီးနောက်ရက် ၃၀ အကြာတွင် streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
သက်ဆိုင်သော: Netflix ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းများ။
IMDB များအတွက်ရာသီဇာတျစာရင်းပြုစုထားသည် SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ4မေလ 16 ရက်နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်ရန်နှင့်ထိုနောက်ရက်ပေါင်း 30 ဇွန်လ 15, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အခါပါပဲ SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ4ဇွန်လ 15 ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိခံရဖို့။
IMDB ဇာတ်လမ်းတွဲလမ်းညွှန်သည်တရားဝင်အစီအစဉ်မဟုတ်ပါ။ ABC သည်ရာသီ (၄) ရာသီအတွက်အပြည့်အစုံမကြေညာသေးပါ SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် သေး, ထိုသို့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဇွန် ၁၅ ရက်ကကျွန်ုပ်တို့ခန့်မှန်းနိုင်သလောက်နီးကပ်သည်။
၎င်းသည်ယခင်က Netflix ရှိစီးရီးသစ်ရာသီ၏အသစ်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အညီမှန်ကန်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ3ကိုဇွန်လ ၁၆ ရက်တွင် Netflix တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည် မေလ 17 ရက်နေ့ရာသီဇာတျသိမျးအောက်ပါ။
အခုတော့စီးရီး၏ပထမ ဦး ဆုံးရာသီသုံးခု Netflix အပေါ် streaming များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် အတွက်အဆင့် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀! ထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင် Netflix တွင်စတုတ္ထရာသီမထွက်ခွာမီသင်စီးရီးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သုံးလခန့်သင့်မှာရှိသည်။
ရာသီကုန်ဆုံးမည့်နေ့ကို ABC မှကြေငြာသောအခါရာသီကို Netflix သို့မည်သည့်အချိန်၌ထပ်မံထည့်သွင်းမည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အတိအကျသိစေမည်။
netflix အပေါ် Rick နှင့် morty
hannibal ရာသီ4Premiere နေ့စွဲ
အားလုံး American အသက်အရွယ်ကနေဂျော်ဒန်
လူဆိုးစာရင်းတဦးတည်း Netflix အပေါ်ထွက်လာကြပါဘူးသည့်အခါ